October 2017 ~ Myanmar Anti Mlm Group
သိတာလေး လာပွောပွတာ 😬😬😬
JJ ရဲ့ကားရဆေေးဆီဆိုငျကို ဟိုတဈနကေ့ တောငျဥက်ကလာဘကျရောကျတုနျးတှလေို့ကျတယျ 😬😬😬
အဲ့လမျးမကွီးတဈလြှောကျ ပလကျဖောငျးတှပွေငျနလေို့ ဆိုငျတှပေိတျထားရတာ တဈလနီးပါးလောကျရှိပီ 😬😬😬
ကိုယျ့အသိ စားသောကျဆိုငျက ရဲစခနျးနားမှာမို့ သူတို့ဆိုငျတှပေိတျထားရတာကွာပီဆိုတာ သိတာ 😬😬😬
အဲ့တော့ သခြောတာကတော့ သူ့မှာ ကားရဆေေးဆီထိုးဆိုငျကနဝေငျငှတှေရေလာစရာအကွောငျးမရှိပု 😬😬😬
ကနျြတာတှကေတော့ အရမျးဝငျငှတှေရေနရေငျတော့ အပွောတတျပု 😬😬😬
သိတာလေး လာပြောပြတာ 😬😬😬
JJ ရဲ့ကားရေဆေးဆီဆိုင်ကို ဟိုတစ်နေ့က တောင်ဥက္ကလာဘက်ရောက်တုန်းတွေ့လိုက်တယ် 😬😬😬
အဲ့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ပလက်ဖောင်းတွေပြင်နေလို့ ဆိုင်တွေပိတ်ထားရတာ တစ်လနီးပါးလောက်ရှိပီ 😬😬😬
ကိုယ့်အသိ စားသောက်ဆိုင်က ရဲစခန်းနားမှာမို့ သူတို့ဆိုင်တွေပိတ်ထားရတာကြာပီဆိုတာ သိတာ 😬😬😬
အဲ့တော့ သေချာတာကတော့ သူ့မှာ ကားရေဆေးဆီထိုးဆိုင်ကနေဝင်ငွေတွေရလာစရာအကြောင်းမရှိပု 😬😬😬
ကျန်တာတွေကတော့ အရမ်းဝင်ငွေတွေရနေရင်တော့ အပြောတတ်ပု 😬😬😬
ပေးလိုကျအတိုး 10 20
နိုငျငံတာကာ forum တှမှော ဖတျကွညျ့ရငျဖွငျ့
မငျးတို့လို့ လူ လိမျမာတှကွေောငျ့
Mlm Pyramid ဂိုဏျးပေါငျးရောငျစုံပါ
နားလညျပါ Anti တို့သတိပေး
Online Pay တှကေို
ကွာရငျနငျတို့ မှဲ ကွတော့မယျ
မီးမီး နဲ့ ရဲရဲနီ
သိနျး ရ၀၀ ဆိုလား
Mlm Company တှေ
မကွာခငျ Diamond ပွုတျဖွဈတော့မယျ
Mlm ရှယျယာချေါ Mining ငှတေိုးတဈဖုံ
မွနျမာ ပွညျ လူလိမျမာ ပေါပါလို့
အဲ လို လူ လိမျ 420 တှကေိုပ
ကဲ လိုကျဆို အားလုံး ကွားကွားသမြှ အမြှ အမြှ အမြှ ခှဲစားကွပါကုနျလော
လူလိမျတို့ လူလိမျတို့ လူလိမျတို့
ပေးလိုက်အတိုး 10 20
နိုင်ငံတာကာ forum တွေမှာ ဖတ်ကြည့်ရင်ဖြင့်
မင်းတို့လို့ လူ လိမ်မာတွေကြောင့်
Mlm Pyramid ဂိုဏ်းပေါင်းရောင်စုံပါ
နားလည်ပါ Anti တို့သတိပေး
Online Pay တွေကို
ကြာရင်နင်တို့ မွဲ ကြတော့မယ်
မီးမီး နဲ့ ရဲရဲနီ
သိန်း ၇၀၀ ဆိုလား
Mlm Company တွေ
မကြာခင် Diamond ပြုတ်ဖြစ်တော့မယ်
Mlm ရှယ်ယာခေါ် Mining ငွေတိုးတစ်ဖုံ
မြန်မာ ပြည် လူလိမ်မာ ပေါပါလို့
အဲ လို လူ လိမ် 420 တွေကိုပ
ကဲ လိုက်ဆို အားလုံး ကြားကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ ခွဲစားကြပါကုန်လော
လူလိမ်တို့ လူလိမ်တို့ လူလိမ်တို့
Anti MLM ကဗျာ / Aye Chan Aung
ကိုလတ် ခေါ် စိုင်းမျိုးမင်းလတ်
အဆိပ်ရှီတဲ့ကောင်တွေ မင်တို့ လောက်တော့
ငါတို့ လော်စပီကာ နိုင်ငံကမကြောက်တော့ဘူးကွ။
အိန္ဒိယမှ ၀ရမ်း​ပြေး ​ငွေလိမ်​ဂိုဏ်းအဖွဲ့ မြန်​မာပြည်​တွင်​ ​လာ​ရောက်​လိမ်​လည်​
OneCoin ​သညျ​ ​ငှလေိမျ​ဂိုဏျးဖွဈ​​ကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ​။
၎င်းငျး OneCoin ​ငှလေိမျ​ဂိုဏျးကို
OneCoin ​ငှလေိမျ​ဂိုဏျး leader အ​ယောကျ​ ၃၀ခနျ့​ကို ဖမျးဝရမျးထုတျထား​​ပွီး ၂၃ ​ယောကျ​ ဖမျးမိထားသညျ​။
⚠ အထူးသတိပွုရနျ​ ⚠
အိန်ဒိယနိုငျ​ငံတှငျ​ OneCoin ​ငှလေိမျ​ဂိုဏျးကို ဝရမျးထုတျ​ဖမျးဆီး​သော သတငျး
Paing Min Khant https://m.facebook.com/groups/521691951357295?view=permalink&id=725806024279219
OneCoin ​သည်​ ​ငွေလိမ်​ဂိုဏ်းဖြစ်​​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​။
၎င်း OneCoin ​ငွေလိမ်​ဂိုဏ်းကို
OneCoin ​ငွေလိမ်​ဂိုဏ်း leader အ​ယောက်​ ၃၀ခန့်​ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထား​​ပြီး ၂၃ ​ယောက်​ ဖမ်းမိထားသည်​။
⚠ အထူးသတိပြုရန်​ ⚠
အိန္ဒိယနိုင်​ငံတွင်​ OneCoin ​ငွေလိမ်​ဂိုဏ်းကို ဝရမ်းထုတ်​ဖမ်းဆီး​သော သတင်း
One Coin / Py Min Khant
ထိုင်းက မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို လိမ်နေတဲ့ ဂျင်းကောင်ပါ။
ဘန်ကောက်ရောက်မြန်မာပြည်သားများအတွက် တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက် အချိန်ပေးနိုင်ရုံနှင့် Facebook သုံးရင်းငွေရှာချင်သူတွေအတွက်
ဆင်းရဲခြင်းမှ လွှတ်ကင်းကြဖို့ တစ်နေ့အချိန်ပိုတွေ3နာရီမှ 4နာရီရှိ့သူအတွက်
အချိန်ပိုင်းအလုပ် တစ်ရက်ကို 3နာရီ 4နာရီ လောက်အချိန်းပေနိုင်တဲ့သူများအတွက်ပါတစ်ပတ်ကို ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ အထိရနိုင်သည် ကိုကြိုးစာရင်ကြိုးစားသလောက်ရမယ်
( အလုပ်ကြိုးစားသူများအတွက် အခွင့်ရေးပါ
အသက် ၁၈ နှစ်ထက်ဖြစ်ရမည်.. လုပ်ရမဲအလုပ်က
online shoping လုပ်​ပါ internet သုံးလို့ရတဲ့ လုပ်​ပါ phoneတို့နှင့်FbနဲLineတွေနဲ့လုပ်ရမည်ထိုင်းစကားအနည်းငယ်ပြောတတ်ရမည်
MLM က အောင်မြင်သူကြီးတွေ
ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက MLM Company တစ်ခုက လွှတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့
ဘဏ်အကောင့် လာဖွင့်ကြတဲ့ ရွာဘက်က လူတွေ တွေ့ဖူးတယ်…
ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် လက်မှတ် ဖြောင့်အောင် မထိုးတတ်လို့ မှင်နဲ့ လက်ဗွေယူပြီး အကောင့်ဖွင့်ပေးလိုက်ရတဲ့ လူတွေဟာ MLM က အောင်မြင်သူကြီးတွေ အခေါ် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကို ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာကို တစ်လတစ်ခါ ခရီးထွက်ကြဦးမတဲ့…
နိုင်ငံခြားမှာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းနားဆုံး ပါတီပွဲကြီးမှာ စင်ပေါ်တက်ပြီး သိန်းတစ်သောင်းလောက် ဆွတ်ခူးရမယ့်
သူတို့ အိပ်မက်တွေတော့ ဘာဆက်ဖြစ်တယ် မသိဘူး…
အနည်းဆုံး ငွေ လေးငါးသိန်းရင်းထားတဲ့ နောင်အနာဂတ် သူဌေးလောင်းတွေဟာ လကုန်ရက်တိုင်း ဘဏ်စာရေးကို မျက်နှာငယ်နဲ့ အကောင့်ထဲ ငွေဝင်သလား မေးရတာကတော့ လက်တွေ့ ဖြစ်လာတယ်…
ကံအကောင်းဆုံး မန်ဘာ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စဟာ Bonus ခေါ်တဲ့ ငွေလေး ငါးထောင် တစ်သောင်းလောက် အကောင့်ထဲ ဝင်လာရင် တခြားလူတွေထက် အရည်အချင်းရှိလို့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ခါနီးပြီလို့ ယူဆကြရတယ်…
အောင်မြင်ခါနီးမှ ကပ်လွဲသွားတယ် မဖြစ်ရလေအောင်
ဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့ တောသူတောင်သားတွေဟာ ကျန်းမာရေးကော်ဖီတို့
ပြန်ရောင်းရအောင်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဒီနတ်သုဒ္ဓါ ဇီဝကဓာတ်စာ စွယ်စုံ ဆေးနာမည်ကို တည့်အောင် မခေါ်တတ်ဘူး…
ဒီလိုနဲ့ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းကတော့ ဘယ်နေတယ် မသိဘူး…
မိဘလက်ငုတ် တောင်ယာအလုပ်ကတော့ မြေဂရမ်ပါ အပေါင်ဆိုင် ရောက်နေတယ်…
ပဲနှမ်းပေါ်တုန်းက ဝယ်စုထားတဲ့ ရွှေတွေအစား ခြင်ကိုက်ဖုကနေ HIV ထိ ပျောက်တဲ့ ဆေးဝါးတွေက နေရာယူလာတယ်…
ဆန်အိုးထဲမှာ ၉၆ပါး ပျောက်တဲ့ ဓာတ်စာတွေသာ ပြည့်လာတယ်…
ကားအသစ်ကျပ်ချွတ်ကြီးတွေနဲ့ လက်မကြီးတွေ ထောင်ပြီး တွဲရိုက်ထားတဲ့ အတုယူစရာ အောင်မြင်သူ Leader ကြီးတွေတော့ ဘယ်ရောက်သွားတယ် မသိဘူး…
ဘဏ်အရောက်မောင်းလာတဲ့ စူပါကပ်အနွမ်းလေးတွေကတော့ တဖြည်းဖြည်း ကျဲပါးလာတယ်…
MLM ကို မလုပ်ဖူးဘဲ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး…
လုပ်ရင်းနဲ့ လုံးပါးပါးသွား သူတွေကို မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့တာ…
ဘာနာနာ လူးရုံနဲ့ ပျောက်တဲ့ သွားတိုက်ဆေး ဆိုသဟာကြီးကို သောင်းကျော်ပေးဝယ်မယ့်အစား
ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ကိုးလ်ဂိတ်ကို တစ်ထောင်ကျော်နဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကို သနားစရာ အသိဉာဏ်နုံနဲ့တဲ့ သတ္တဝါလို မျက်လုံးလေးစင်းပြီး ကြည့်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်သူလောင်းလျာကြီးတွေဟာ ခုဆို မနက်လင်းရင် သွားတိုက်စရာ မီးသွေးခဲတောင် ကျန်ပါ့မလား မပြောတတ်ဘူး…
ရင်သားကင်ဆာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ရုံမက
အသားအရည်စိုပြေနုဝင်းပြီး ဆံပင်ပါ မဖြူတောမယ့် ဆေးမဟာကြီးကို ဖော်စပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာကြီးဟာ ခုဆို နိုဘယ်ဆုများ တက်ယူနေပြီလား ဆိုတာ တွေးတောရင်း …
ဘယ်​က ထုတ်​တာလဲလို့ ​မေးလိုက်​တယ်​
SSM ကတဲ့ ဒါနဲ့ SSM ကဆိုရင်​​တော့မသုံးဘူးလို့
ထပ်​​ပြောလိုက်​တယ်​ MLM က ပစ္စည်း​တွေ​ရော
ဘာလို့လဲဆို​တော့ ကျ​နော်​က အလိမ်​ခံထားရတာဂို 😂 😂 😂
အခြေခံလူထုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုရှိနေတဲ့ Multi Level Marketing #စံတော်ချိန်_သတင်းဆောင်းပါး
အခြေခံလူထုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုရှိနေတဲ့ Multi Level Marketing
Video / Zinzae / စံတော်ချိန်
Successmore..member. ဝင်တွေ..MaRose မောင်ကို..သူတို့ပစ္စည်းလေးဝယ်အားပေးပါအူးဆိုလို့..သွားတိုက်ဆေး..(8000).Body Cheer.('6000)လူကိုအားနာလို့ဝယ်လိုက်ရတာ..member တော့မဝင်ပါဘူး..ပစ္စည်းသာအားနာနာနဲ့ဝယ်လိုက်တာ..ဝယ်ပြီးမှသိရတယ်...နောက်ကို..MLM..နဲ့ပြင်ပဈေးထက်..မတန်မရာ. အားမပေးကြပါနဲ့..နင်တို့..SSM..ပစ္စည်းကောင်းတယ်ဆိုနင်တို့ဘာသာသုံးကြလေ..ဘာလို့ကျန်လူတွေလိုက်ရောင်းနေတာလည်း..အရှက်မရှီတဲ့..SSM. ကဟာတွေရဲ့..
Ma Rose / Successmore
KBZ bank က ၀န်ထမ်းဟောင်းတစ်ယောက် ပြောပြတဲ့ MLM အကြောင်း။
MLM အကြောင်းလေး သိသမျှလေးပြောပြချင်လို့ပါ။ ကျနော်က မန်းလေးက kbz bank မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘဏ်မှာမလုပ်ခင်ကတည်းက MLM တွေနဲ့ အများကြီးဆက်ဆံဖူးပါတယ်။
စစချင်း ၂၀၀၇လောက်က MLM ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Healthy shop မှာ member ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းဆွေမျိုးတွေကိုလဲ ကိုယ်အောက်မှာ လူများအောင်ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်တွေလဲတက်ပါတယ်။
သို့သော် အသက်က ၁၇လောက်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် စကားတွေရွှန်းရွှန်းဝေအောင်အမွန်းတင်ပြီး မဆွဲဆောင်နိူင်ခဲ့ပါဘူး။
ငယ်လဲငယ်သေးတော့ သေချာမလုပ်ခဲ့ဘူး ပစ္စည်းတေက ထူးခြားပြီး သုံးလို့မကောင်းတာလဲပါတယ်။
ဈေးသည်ကြီးလိုလိုက်ပြောနေရတာလဲ မလုပ်ချင်တော့တဲ့အတွက် ဖာသိဖာသာပဲ နေလိုက်ပါတယ်။
သွင်းထားတဲ့ ဝင်ကြေးတွေလဲ ပလုံ ပေါ့။
နောက်တော့ shine hope ကလင်ဇီးဆေး၊ ကော်ဖီ၊ သွားတိုက်ဆေး၊ ခေါင်းလျော်ရည်၊ ဆပ်ပြာရည်၊ လုံးဝ organic ဆိုလို့ ကြိတ်မှိတ်ဝယ်သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ သိလဲမသိသာခဲ့ဖူး။
ရောင်းသွားသူသာ မြတ်သွားခဲ့တယ်။ memberကြေးမတတ်နိုင်လို့ မဝင်ခဲ့ရဘူး။ တော်သေးတာပေါ့။ မဟုတ်ရင်ကိုယ်လဲ တအိမ်တက်ဆင်း ဈေးသဂ်ကြီးဖြစ်ဦးမှာ။
နောက် Successmore / Unicity / Aimstar /Tiens စသဖြင့်ပွထလာပြီး စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူး။
KBZ bankမှာဝင်လုပ်တော့ Aimstar ကလူတွေအများကြီး acc လာဖွင့်ပါတယ်။ တယောက်တထောင်နဲ့။
အဲ့ Aimstar ကလဲ kbz saving acc ရှိရမယ်။ လဆန်းပိုင်းတိုင်းမှာ ငွေတွေအမြဲထည့်ပေးမယ်လို့ ဆွယ်ပါတယ်။
bank နဲ့ လွဲမယ်စုပြီးသားဖြစ်မယ် ဆိုပြီးဆွယ်တော့ လူတိုင်းကယုံကြတယ်။
တခါတခါလာဖွင့်ကြရင် light truckကားကြီးနဲ့ မိန်မတွေများတယ်။ အဲ့လိုရက်ဆို သိပ်စိတ်ညစ်ကြပါတယ်။
အလကားလဲဖွင့်ပေးရသေး။ ထည့်တော့တထောင်ထဲ။ အများကြီး စုမဲ့ သူလဲမဟုတ်။
လကုန်တိုင်းလဲ မဖြစ်စလောက်ပမာဏကိုထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ စိတ်ထဲက ငူစူမိပါတယ်။
Aimstar ကြီးကိုလဲ အသေမုန်းတယ် သူတို့လာမှာကိုကြောက်နေတာ။
MLMဟာ ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆို လက်လုပ်လက်စားအောက်ခြေသမားတွေက ကိုယ်ဘဝရည်ရွယ်ချက်တေပျောက်ပြီး အလွယ်လမ်းကိုပဲ အကျင့်ကြီးပါသွားတော့တာ။
Aimstar က memberတွေဟာ ဘယ်လောက်တောင် အလွယ်ပိုက်ဆံလိုချင်သွားလဲဆို kbz bank ကို လမ်းမလျောက်နိုင် အသက်၆၀ ၇၀လောက် စာမတတ်တဲ့အမေအိုကြီးကို
နယ်ခရီးဝေးကနေ ချီလာပြီး acc ဖွင့်ခိုင်း။
စာမတတ်တော့ လက်ပွေနိပ်ခိုင်းပြီး လူရှာ။
လက်ဗွေနဲ့ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ ဘဏ်ဘက်ကကြည့်ရင်လဲ securityအနေနဲ့ လုံခြုံမှုမရှိကြောင်းရှင်းပြတာကို
Aimstar member ဝင်သားဟာ သူ့ရဲ့ကွန်ယက် Line အောက်မှာ လူများဖို့ လူပွားဖို့ပဲလောဘတက်နေတော့ အမေ့ကို acc ဖွင့်လို့ရကိုရမယ်နည်းလမ်းနဲ့သာ ဖွင့်ပေးပါဗျာလို့ကို
အရမ်းပြောနေတော့ သဘောကောင်းတဲ့ မန်နေဂျာအမကလဲ customer ပဲဆိုပြီး ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ တခါတခါ လကုန်ခါနီး Aimstarကလူတွေရဲ့
memberငွေတွေ လွဲလာတဲ့အခါ စာရင်သွင်းရင် စိတ်အညစ်ရဆုံးပါ။
ကိုယ်သွင်းရလို့စိတ်ညစ်တာလဲပါသလို ဒီလို လူတွေကိုလိမ်ညာစားတေတဲ့ Aimstarရဲ့လွဲငွေတွေက ပိုလို့စိတ်ညစ်စရာပါ။
၃၄၅.၇၅ ကျပ်၊ ၁၀၉၅ကျပ်၊ ၄၅၆.၇၈ ကျပ်၊ ၂၀၇၅ကျပ်၊ ဒီလိုပမာဏလေးတွေက ၅၀%လောက်ပါပါတယ်။ နဲနဲရာထူးကြီတဲ့ ၁၀% လောက်က
၅၀၇၈ကျပ်၊ ၇၈၀၉ ကျပ်။ ၁၀၈၅ ကျပ်။
ပိုကြီးရင် နှစ်သောင်း၊ သုံးသောင်းရကြတယ်။
မြင်ဖူးသမျှအများဆုံးငွေဟာ ၈သောင်း ၁သိန်းပဲ။
တလတလသူတို့အမှတ်တက်လာခဲ့လဲ အပေါ်ကလူများတဲ့သူတေသာ သိသိသာသာတိုးပါတယ်။
အောက်လူတွေဟာ ၃လတခါသာ ၇ထောင် တသောင်း ၂သောင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။
အလွန်ဆုံးထုတ်နိုင်တာ မန်နေဂျာအဆင့် ၁၀ သိန်းလာထုတ်တာပဲမြင်ဖူးပါတယ်။ ၀.၀၀၀၁%ပါပဲ။
ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်နေရင်လဲ တခါ နခါ သုံးခါ နားကိုမခံနိုင်လောက်တော့လို့ အဲ့လူဆိုရှောင် ပြေး ပုန်းရတော့တာပါပဲ။
Shine hopeနဲ့ Aimstarကအဆိုးဆုံးပါ။
(သူပြောပြထားတွေကို နည်းနည်းပြန်ပြင်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
Successmore / Troll / စိုင်းမျိုးမင်းလတ်
Ko lat ရေ လူမဆွယ်ဘူးနော်
Ko lat ရေ လူမဆွယ်ဘူးနော် 😅 😅 😅 😅 😅
Successmore က ပဲ ။
စီးပွားရေးနဲ့ လူလိမ်ဂိုင်း နဲ့ တူမှမတူတာ။
Group ၁ ခုခုမှာ လူ၁ယောက်က အရင်းနှီးရှိတယ် ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးလားရင် ပျားအုံသလိုပဲ ဝိုင်းပြီးကိုလိုက်ကျတာ။
အစားအစာရောင်းရမယပြောလို့ wall ထဲဝင်ကြည့်တာ
Successmore / စိုင်းမျိုးမင်းလတ်
MLM လုပ်ငန်းမဟုတ်ပေမယ့် MLM လုပ်ငန်းတွေ ထက်ကို သတိထား သင့်တဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခု မို့လို့ ဒီ Group မှာပါ တင်ပေးတာပါ ။
MLM လုပ်ငန်းတွေ ထက်ကို
သတိထား သင့်တဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခု မို့လို့
ဒီ Group မှာပါ တင်ပေးတာပါ ။
နောက်ဝင် လူတွေရဲ့ ထည့်ဝင်ငွေတွေကို
ရှေ့လူတွေကို လှည့်ပြီး ပြန်ပေးနေတဲ့
Ponzi Scheme တွေနဲ့
လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ ဆင်နေပါတယ် ။
လစဉ် ၂၀-၃၀% အတိုး ပေးနေတယ်ဆိုတာ
ကြက်သီး ထ လောက် စရာပါ ။
စိတ်ချလို့ မရပါ ။
နှစ် ၂၀ ကျော်လောက်
Ponzi Scheme လိမ်လည်မှု ပြုလုပ်သွားတဲ့
Bernard Madoff လို လူမျိုးကို
အခု ဒီ လုပ်ငန်းကို
သေချာပေါက် လိမ်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲနေတာ မဟုတ်ပေမယ့်
အထူး သတိထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ ။
လိမ်ခံရတယ်ဆိုတာ သေချာတော့မှ ပြောရင်
လုပ်ငန်း လည်ပတ်ပုံကို သံသယ ရှိကတည်းက
ကြိုတင် သတိပေးရတဲ့ သဘောပါ ။
ညီ Awba Return ရေ ဒီလို လုပ်ပါလား ညီ ?
ညီ Awba Return ရေ
ဒီလို လုပ်ပါလား ညီ ?
စာရင်းစစ် တစ်ယောက် ကို ဝင်ပြီး
မင်းတို့ မ Jude Jude ရဲ့
သူ့ လုပ်ငန်းတွေကနေ ထွက်လာတဲ့
အသားတင် အမြတ် သီးသန့်ကတင်
မင်းတို့ ငွေရင်းထားသူ အားလုံးရဲ့
သိန်း ၅၀ လျော်ပေးမယ် ။
အစစ် ခံရဲ လား မေးကြည့်စမ်းပါ